Baakadaha iyo rarka: noocyada jira iyo kuwa ugu fiican | Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | 28/05/2021 14:01 | shirkadaha
Markaad ganacsi leedahay oo ay tahay inaad alaab u dirto macaamiisha, had iyo jeer ma lihid A ama B. Taasi waa, ma lihid ikhtiyaar aad ugu dirto sanduuq ama baqshad. Dhab ahaantii, waxaa jira noocyo badan oo baakado ah, labadaba sanduuqyada iyo gudaha kiiska baqshadaha. Isla sidaas oo kale ayaa u socota xulashooyinka maraakiibta. Kaliya ma isticmaali kartid Correos, sidoo kale waad leedahay shirkado badan oo warqado dir ah oo mas'uul ka ah qaadashada amarrada kuwa qaata.
Haddii aadan waligaa joojin inaad ka fikirto hadda kahor oo aad hadda rabto inaad ogaato waxa baakadaha aad isticmaali karto, siyaabaha kala duwan ee loo istcimaalo, ama xulashooyinka aad u leedahay inaad u dirto alaabadaada, halkan waxaan uga wada hadli doonnaa dhammaantood xagga hoose. Sidaa darteed, xitaa waad ka fiirsan kartaa rarka sida nooc ka mid ah kala duwanaanshaha marka loo eego tartanka.
1 Maxay tahay sababta habka alaabada loo geeyo arrimaha
2 Noocyada baakadaha ee shirkadaha
3 Ikhtiyaarrada rarka: kee baa fiican?
Maxay tahay sababta habka alaabada loo geeyo arrimaha
Markuu qofku amar ku bixiyo internetka (ama qaab kasta oo kale oo ku lug leh ka helitaankiisa gurigiisa ama xafiiska adoo u diraya farriin ama boosto), waxaan ognahay in waxa ugu yar ee ay eegi karaan ay yihiin xirmada. Iyaga waxa ugu muhiimsan waa waxa gudaha ku jira. Si kastaba ha noqotee, runtu waxay tahay in daryeelka "aragtida ugu horreysa" ee aad samaysaa ay muhiim u tahay ama ka muhiimsan tahay ilaalinta waxa gudaha ku jira.
Sidaa darteed, markaad la shaqeyneyso baakado kala duwan, waa muhiim hel midka ugu habboon marka loo eego nooca badeecada aad rabto inaad dirto; maaha kaliya in laga hortago xumaanta, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxaad abuuri kartaa dareen faahfaahsan oo qofka ka dhigaya inuu ku celiyo markuu wax iibsanayo.
Adeegsiga sanduuqyo midabbo leh, oo leh astaanta shirkadda, ama xitaa xargo shaqsiyeed (midab leh, oo leh magaca shirkadda, oo leh faahfaahin ama sawirro, iwm.) Waxay noqon karaan xulashooyin wax ku ool ah.
Dhibaatadu waxay tahay, markay tahay maraakiibta, waxaan marwalba u maleyneynaa inay jiraan laba ikhtiyaar oo keliya: baqshad ama sanduuq. Laakiin xaqiiqda, waxaa jira kuwo kale oo badan.
Noocyada baakadaha ee shirkadaha
Ka soo qaad in ay tahay inaad soo dirto wax soo saar. Waxa caadiga ah waa inaad ka fikirto inaad ku soo dirto sanduuq waana taas laakiin laakiin, haddii ay aad u yar tahay, bedelkii sanduuqa waxaad ka fiirsan lahayd boorso, ama baqshad. Ama waxaa laga yaabaa sanduuq yar. Suuqa baakadaha, waxaa jira xulashooyin badan oo laga kala xusho. Waxay kuxirantahay walxaha, waxaad kaheli kartaa waxyaabaha soosocda:
Baakadaha: Iyagu waa xulashooyinka ugu waaweyn ee fududeynaya u raritaanka alaabada culus iyadoo laga ilaalinayo dhinacyada oo dhan.
Kunteenarada: Waa habka rarida ee ganacsiga baaxada leh, maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa alaabo waaweyn oo leh awood balaaran waxaana loo adeegsan jiray in lagu qaado badeecadaha berriga, badda ama hawada.
Dambiisha Aad ayey qaali u yihiin, qaar badan oo ka mid ahna waxay badanaa la yimaadaan xirmo xumbo leh si loo ilaaliyo waxa gudaha ku jira. Kuwa dambe ayaa kor u qaadaya qiimaha wax yar laakiin baakadaha gudahooda, waa kuwa ugu qaalisan.
Baqshadaha:Arrinta baqshadaha waxay lamid tahay tan kore. Waxaa jira cabirro badan, oo leh adkaansho yar ama ka yar, oo leh xumbooyin si loo ilaaliyo gudaha, iwm. Qiimaheeda ayaa ku dhow tan boorsooyinka maadaama ay aad u jaban yihiin. Badankood waxaa laga sameeyaa warqad culeysyo kala duwan leh ama kartoonno (adag ama jilicsan, waxay kuxirantahay dhumucdiisa).
Jawaanno: Jawaanada ayaa aad uga baaxad weyn boorsooyinka ama baqshadaha, in kasta oo waliba laga samayn karo warqad, haddana waxaad badanaa arkeysaa iyaga oo ka samaysan caag ama dhar. Ujeeddadeedu waa in la ilaaliyo waxa gudaha ku jira, taasi waa sababta loogu abuuray lakabyo kala duwan oo, markii la buuxiyo, la xiro.
Bacaha la buufin karo: Baakadani waxay leedahay astaamo ay ku buufiso hawo cadaadis leh markay xidhan tahay, habka ay u ilaalineyso alaabada si aysan u dhaqaaqin waqti kasta. Markaad furto, hawadu wey baxaysaa oo sheygu waa siduu yahay. Way ka qaalisan tahay bacaha caadiga ah, nidaamka ay sidato awgeed.
Khaanadaha: Sanduuqyadu waa adduun dhan. Kaliya maahan inay jiraan sanaadiiqda kartoonada ee caadiga ah ee aad hesho, laakiin waxaa jira kuwa kale oo adag, sanduuqyada kuleylka leh (ee u adkeysanaya qabowga ama kuleylka, sanduuqyada qaabdhismeedka ah (si midba midka kale loo dhigo) ... Kuwa ugu raqiisan waa kuwa aasaasiga ah, kuwaas oo ah kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan ganacsiyada ay la socdaan baqshadaha iyo boorsooyinka.
Ikhtiyaarrada rarka: kee baa fiican?
Markaad ogaato noocyada baakadaha, iyo xulashooyinka ugu jaban ee aad ka dooran karto, rarku waa qodob kale oo muhiim ah oo laga fiirsado. Maxaa yeelay, ma jiro oo keliya Xafiiska Boosta; sidoo kale shirkadaha dirista. Kuwaasna, waxaa jira kuwa badan oo laga kala doorto (kaliya ma ahan kuwa ugu caansan sida Seur, MRW, Correos Express, Nacex, DHL, iwm) laakiin waxaa jira kuwa kale oo aan la aqoon laakiin taasi faa'iido badan ayey yeelan kartaa.
Guud ahaan, waxa ay tahay inaad ku xisaabtantaa waa halka ay u socdaan alaabada aad iibinayso. Haddii kuwani had iyo jeer noqdaan kuwo qaran, taas oo ah, u soo safrida isla waddan, waxaad dooran kartaa shirkado daboolaya dhammaan magaalooyinka oo waliba ku siiya qiimo wanaagsan; Laakiin haddii rarkaagu uu yahay mid caalami ah, waxaa habboon in la sameeyo heshiis ama iskaashi lala yeesho shirkad si loola macaamilo kuwa waddaniga iyo kuwa caalamiga ah.
Maxaa ugu jaban? Shaki la’aan, Xafiiska Boosta. Maskaxda ku hay in shirkadani ay leedahay ikhtiyaar ah in dadka iskaa u shaqeysta (gaar ahaan haddii ay ka diiwaangashan yihiin qaybo ka mid ah IAE) ay u diri karaan alaab qiimo jaban. Tusaale ahaan, buug kugu kici kara inta udhaxeysa 3 ilaa 7 euro, waxaa laga yaabaa inuu ganacsade ku diro 30-50 senti inuu soo diro. Haddii aan sidoo kale dooneyno inaan caddeynno, kororku aad uma sarreeyo.
Dhinaca kale, diristayaasha had iyo goor sicirka ayaa ka sarreeya; Gaar ahaan haddii bilowga ganacsigaaga aadan haysan amarro badan. Haddii ay jiraan tiro badan oo shixnad ah, shirkaddu waxay bixisaa qiimo aad u jaban, laakiin sida caadiga ah maahan sida Correos oo kale.
Hadda, labada xaaladoodba waxaa ku jira faa'iidooyin iyo khasaare. Tusaale ahaan, Correos waxaad ku haysataa dhibaatada, inta badan, alaabtu kuma timaado waqtigii loogu talagalay, ama way lumaan. Dhanka kale Warqadaha waxay la kulmayaan waqtiga kama dambaysta ah ee alaabta la keenayo. In kasta oo aan laga dhaafi karin dhibaatooyinka masiibada ee badeecada, inay luntay, iwm.
Ka jawaabida labada midkee fiican ayaa adag. Sida dhaqaale ahaan ka badan, Correos; sida ugu waxtarka badan, dirista. Xulashada ugu fiican? Sii macaamilka xulasho. Sidan oo kale, waxay go'aan ku gaadhaa iyada oo ku saleysan waqtiga sugitaanka ama qiimaha adeegga maraakiibta ay lahaan karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Negocios » shirkadaha » Baakadaha iyo rarka: noocyada jira iyo kuwa ugu fiican
Yari rodriguez dijo
samee Toddobaadyada 3
Aad u fiican, waad ku mahadsan tahay macluumaadka.
Jawaab Yari Rodriguez